छोरीमान्छे – छायादत्त न्यौपाने ‘बगर’ | Nepali Sahitya Ghar – नेपाली साहित्य घर
Home सिर्जना संस्मरण / निबन्ध / नियात्रा निबन्ध छोरीमान्छे – छायादत्त न्यौपाने ‘बगर’
on: बैशाख २७ , २०७९ मंगलवार- ०७:३०
असजिलो छ छोरीमान्छेको जीवन । छोरी बाको बन्धन, विवाहपछि पतिको बन्धन । पतिपछिको बन्धन छोराको । सामाजिक पोयाको कठोर बन्धन त झन् कसिएकै हुन्छ निरन्तर । पुरानो समय नजन्मिउन्जेल नछोरा नै हो कि ! आमाप्रति थोरै सद्भाब रहन्थ्यो । अचेल त प्रविधिले पहिल्यै देखाइदिन्छ के हो ? छोरी भनेपछि आमाको मन कँुडिन र कुँड्याउन सुरु हुन्छ । कुनै आमा थोरै कुँडिन्छिन् कुनैलाई धेरै कुँडिन बाध्य पारिन्छ । कुँड्याइले प्रहार त गर्छ नै । छोरा होस् वा छोरी जन्माउने इच्छा आमाबा दुवैको हुन्छ तर जिम्मेवारी आमाले मात्र लिनुपर्ने रे ! बाले त्यसको जिम्मेवारी लनिुनपर्ने उनी त हकदार मात्र । छोरीसँग खेल्न गफिन खोज्छन्, लाडिएर रमाउन चाहन्छन् तर ती छोरीका बाआमा अरु हुन्छन् । अचम्म त त्यहाँ गएर गजक्क पर्छ जहाँ आफ्ना स्वास्नी, छोरी, बुहारी अरु कसैसँग बोले, हाँसे, घुमे भने खानदानमा ध्वाँसो पोतिने, नाक काटिने ! तर आपूm स्वयं यस्तै क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागी हुँदा रमाइलो मात्र हुने ! यो मनोविज्ञान अनौठो छ, कति अनौठो कति अनौठो ! नापो छैन । यसले व्यक्ति स्वयंको पारोमा भर पार्छ ।
परिवारको कुरा एउटा पाटो ! समाज सिङ्गो, झन् बढी खनीखत्र । आफ्नो आङमा भैंसी चरेको देख्दैन । अरुका रौं रौं कोट्याउँछ र लिखा बटुल्छ । गजबको छ सामाजिक चेतना ! प्रत्येक छोरी, छोरी हो, बुहारी, बुहारी हो र स्वास्नी, स्वास्नी हो । आमाको प्रतिबिम्ब आँखा हुनेले त्यहीँ देख्छ । आमा, दिदी बहिनी, फुपू, बुहारी, घरमै हुन्छन् भने छरछिमेकमा पनि डुलिरहन्छन् । छोरीसँग जोडिने नाता सम्बन्ध धेरै हुन्छन् । ती प्रत्येकसँग नारिन चाहन्छ छोरो तर बिडम्बना फेरि बिउँझन्छ कि छोरीका खुट्टामा नेल लाग्छ, त्यसको चावी छोराले लिन्छ ।
छोरीको जीवन अधीन–अधीनमै रहने हो ? स्वतन्त्र विचरण गर्ने छोराले मात्र हो ? समाज प्रश्नहरुको घेरामा छ तर ऊ त्यो घेरा देख्दैन, सुन्दैन र मान्दैन । समाज हिजोसँग प्रेम गर्छ, त्यसैसँग स्नेहको डोरी बाँधेर अस्तिलाई समेत तान्छ । यसरी तान्ने तागत उसलाई पूर्वजले दिएका रे ! यो शक्ति प्रयोग गर्न पाउँदा ऊ पूर्वजलाई पुज्छ तर अनुशासनको हातकडी आफैतिर सोझिँदा उहिलेका कुरा खुइले भन्न लाज मान्दैन छोराले । यस्तो अवसर छोरीले कहाँ पाउनू !
छोरी न हुँ दिन दिनै त्रासको ढुङ्गो बोकिरहनुपर्छ मैले । सानै उमेरमा आइपर्ने असजिलाले धेरथोर आमाको स्याहार पाउँछ । अलिक ठुलो भएर छोरी हुनुका गर्विला चिन्ह हुर्किन नपाउँदै बाको शासन सुरु हुन्छ । दाजुभाइले डोरी बाट्छन् । समाजको आँखा फेरिन्छ । आमा तिनीहरुको लयमा मिसिन बाध्य पारिन्छिन्, म कुजिन्छु । पाइलो सार्न खोजे पनि टेकेको ठाउँमा बालुवा, बालुवा । सहज गन्तव्यमा पुगिँदै पुगिँदैन । यात्रामा भेटिनेहरु काँडा उमारेर उभिएका हुन्छन् । मलाई जोगिन ज्यादै धौ हुन्छ तर आँट गरेर पाइला सार्न खोज्यो छोरी मान्छेकाृ तुना खुस्कन्छन्क् । पाइला लडखडाउँछ, बल गरेर दरिन खोजेँ भने छोरीका कमजोरी औंल्याइन्छ, चिथोरिन्छ, हैरान पारिन्छ । छोरामान्छेकै कठोर शासन दोबाटोमा तेर्सिन्छ । विषकुम्भे पयो मुखे भनेभैंm वचनैले अलमल्याउँछ । उमेरको हदबन्दी लागु हुन्छ । छोरी त फन्दाको फन्दै फनफनिन बाध्य ! आफ्नो अगाडि ऐना र ऐनाको अगाडि अनुहार गाडेर त्यही छोरीको खुवाँ पसेर आफूलाई बिर्सने अभ्यास गर्छ छोरो ।
अचम्म छ छोरीको भविष्य ! कतै चरचरबाट उज्यालो छिर्छ कि प्रतीक्षामा छु म । भित्ता र छानुहरुमा सानातिना चर देखिन्छन् । अलिकति आशा पलाउँछ तर घर बलियो बनाउने निहुँमा छानु टालिन्छ, चरहरु मेटिन्छन् । म हत्केलामा कसैका छोराको जाकेट बोकेर पछाडि उभिन्छु । उसले जता भन्छ लुरुलुरु हिँड्छु । मनमा कतिखेर के बेरिन्छ, कस्तो विपत् आइपर्ने हो ! विवश म त्रास बोकिरहन ! कतै हिजो विद्यार्थी छँदा साथीसँग वनभोजमा नाचेको तस्बिर फेसबुकले फैलाउने त होइन ! मन, बिग्रेको मोटरसाइकलभैंm गुटुटु–हुटुटुले उराल्छ । पति नाचेका तस्बिर सामान्य हुन्छन्, स्वाभाविक लाग्छन्, ठिक त्यस्तै प्रकृतिका मेरा तस्बिरले आपत्तिजनक महाविपत्ति ल्याउँछ । यस्तो व्यक्ति, समाज र संस्कृतिले पालेकी छोरीमान्छे मैले अनि स्वच्छन्द विचरण गर्छु भनेर सपना देख्नू !
हो नि गजबको छ छोरीको जिन्दगी । अँ, हो, यो आफै पनि गजब छ । छोरी भएर रमाउन सक्छे तर बुहारी भएर खुसी हुन पाउँदिनँ । सम्झनाको झोली थाम्ने सासूले बुहारी भएर निर्वाह गरेको भूमिका कस्तो थियो ? हिजो आफू उभिएको भुइँ नहेरी अरुका खुट्टा भासिएको देख्ने आँखाको उपचार कसरी गर्नेहोला ? बुहारी बन्न नसिकिकनै पगरी गुथेका सासूहरु छोरो पाएको अहङ्कारी पर्खालमा उभिएर अग्लिन बल गर्छन्, पर्खाल कति बलियो छ कहिलेसम्म स्थिर रहन्छ ? हेक्का राख्दैनन् । हो नि, सासूआमा आमामैत्री बन्दिए बुहारीलाई छोरी बन्न सजिलो हुन्छ । अहङ्कारी आग्लो तेस्र्याएर छोरीबुहारीबिच दूरी बढाउने सासूहरु र सासू आमाका कुरा पत्याएर श्रीमती चिढ्याउने छोराहरुको दुब्लो चेतनाप्रति दया गर्नुबाहेक म छोरीसँग विकल्प पनि त बच्दो रहेनछ ।
भुुसुक्क बिर्सन जानेपछि उपचार गर्न मुस्किल हुने रहेछ । मुसाले धान खाएर दुलो पछ्याउँछ बिचरा सोझो भ्यागुताले किसानको चोट पाउँछ । हुन त प्रकृतिका सबै जीवको आवश्यकता छ सन्तुलित वातावारण कायम राखी जीवन जोगाउन तर सचेत हुँ भन्ने मान्छे आफै खुट्टामा बन्चरो चलाइरहन्छ । आज छोरी भनेर नाक खुम्च्याउने बाले बुढेसकालमा तातोपानी उसैसँग पाउँछन् । बुहारी भनेर उपेक्षा गरेकी सासूआमाले उसैसँग औषधी माग्नुपर्छ । जीवन हो, यात्रामा छ कतिखेर कुन घुम्तीमा पुग्छ ? पत्तो हुन्न तर सचेत भनेर चिनिएको प्राणी मान्छेले भूतकालबाट सिकेर वर्तमानसँग पौठेजोरी खेल्दै भविष्य निर्माण गर्नुपर्ने हो तर ऊ विपरीत गरिरहेको हुन्छ । वर्तमानको धुवाँ धुलोमा परेर विगतको यथार्थ बिर्सने आगतमा पानी फेरेर हराउँदो रहेछ । भनाइ र गराइमा कति ठुलो अन्तर कस्तो विचलन !
फलाक्छ मान्छे घाँटी तानेर ! छोरा के छोरी के । दुवै बराबर तर व्यवहारमा बराबर गर्नै सक्दैन । आफ्नी छोरीको सम्मान गर्नेले अरुका छोरीको इज्जत गर्न जान्नुपर्छ भन्ने यथार्थ चुँडालेर बधुवा साँढेसरि उफ्रन्छ । अरुलाई अनुशासन घोकाउँछ आफू फाँडिन्छ । उपदेश दिएर नथाक्ने छोराले छोरीको ठाउँमा बसेर विश्लेषण मूल्याङ्कन गर्दैन । आफूलाई अप्रिय लाग्ने व्यवहार अरुलाई पनि अप्रिय लाग्छ । बालाई खाने बाघले मलाई पनि खान्छ । बुहारीतिर चोरी औला तेस्याउँदा बाँकी औला सासूतिरै फर्केको तितो सत्य लप्सीको दानाझैँ घुटुक्क निल्दैमा पचाइहाल्न सकिन्न । यो गम्भीर स्थितिको विवेचना गरी निष्कर्षमा विश्वास गरे जीवनका धेरै उहापोह तराईको खोलाझैँ कलकल बगिरहन सक्छ । छोरी सृष्टि सौन्दर्य बचाउने अभिन्न अङ्ग हुन् । छोराछोरी दुवैको महत्त्व समान छ । एकले अर्कालाई निषेध गरेर निजी अस्तित्व बचाउन सकिँदैन । छोराछोरीको सहअस्तित्वको परिचय हो मानवीय संवेदना । समाज विकासमा दुवैको उस्तै उत्तिकै बलियो भूमिका रहन्छ तर के गर्नु मान्छे आफै ठुलो, सबल, सुन्दर छु भन्ने प्रवृत्तिको भरिया बनिदिएपछि ? यस्ता कमसल सोच पालेर व्यवहारमा खुम्चिएकैले मान्छे फराकिलो मैदानमा पुग्न नसकेको हो । आपसमा सद्भाव राखेर सत्कर्ममा लाग्ने उद्देश्य हो प्रत्येक मान्छेको तर कति मान्छे स्वार्थमा बढी लिप्त छन् कति पेसामा आग्रह राख्छन् । आफूले गरेको काम व्यवहार प्रतिक्रिया कति स्नेहसिक्त छ ? ख्यालै नगरी मेरा गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने निम्छरो चिन्तनको सिकार बनेर आफू सङ्र्कीण रहने र अरुलाई पिडा पु¥याउने प्रयास भइरहेको चाल नपाउने बुद्धिजीवीको भीड कहिले खुम्चिएला ? यो मानवीय मर्म, संवेदना र सामाजिक दायित्व विपरीत गतिविधिको परिणामले कहाँ पु¥याउला म छोरीलाई !
धेरै मान्छेको प्रिय बन्न सकिन्छ । विवेकको प्रयोग गरी परिश्रममा विश्वास गर्न जाने मान्छे, मान्छेकै तहमा अडिन सक्छ । नैतिक भ¥याङ भाँचेर अग्लिन खोज्दा उसको अनुहार बिग्रने हो । काम गरेर माम खाने र विभेदको राजनीतिक फोहोर बढारेर स्वच्छ चरित्र निर्माण गर्न सके बाँच्ने हो मान्छे । छोराछोरीसँगै चम्किए सुखद बन्ने हो मान्छे र समभावले जीवन्त । मान्छेले मयल पखालेर निर्मल जीवन जीउन सिके पानीमाथि ओभानु छु भन्ने भ्रम पाल्नै पर्दैन । वंश परम्पराले छोराछोरीमा भेद गरेको पाइँदैन । प्रकृतिमा पनि पुरुषप्रकृतिको सहअश्तित्वले सृिष्ट सौन्दर्यमा गति थपेकै हुन्छ । प्राचीन सभ्यताले पनि छोराछोरीमा विभेद पालेको पाइँदैन । वैज्ञानिक चेतनाले पनि विभेद गर भन्दैन । सामाजिक व्यवहारमा पनि विभेद गरेर छोरीलाई कमजोर साबित गर्नुको विशेष प्रात्ति देखिँदैन तर पनि मान्छेमा अहङ्कार छ, यो वनमारा झारसरि मोलाउँदो छ आज एक्काइसौं सदीमा पनि । यसले मानवीय सोच र मूल्यको उन्नतिमा काँडेबार बनेर आफूलाई पालिरहेको छ ।
चेतनाको बिउ, विकास र सामाजिक सहिष्णुताका लागि सँगै हुर्केका छोराछोरी सँगसँगै यात्रामा दौडिन पाउनुपर्छ । यसलाई विभेदको घोचोले बाधा गरेर सहअस्तित्वमा बालुवा छर्न मिल्दैन । राजनीतिदेखि घरनीति, उद्योगव्यवसाय शिक्षा, स्वास्थ्यमा छोरीको स्पर्श सुखद हुन्छ तर बोली व्यवहारमा आत्मीय न्यायो अनूभूतिको अवसरबाट बञ्चित गरिरहने संस्कारी फोहोरले थिचिरहेको छ । यस्तो फोहोर बढार्ने चेतना, योजना, आँट र कर्तव्यनिष्ठा चाहिएको छ । स्वाभिमानले शिर उचालेर आफै उभिन पाउने छोरीको अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व प्रत्येक नागरिकसँग उक्काउन नमिल्ने गरी टाँस्सिएको छ । छोराछोरीको सहअस्तित्व नैतिक जगमा अडिएर सत्कर्मको सातु खानुपर्ने दायित्व बिर्सेर मोटाउने दुश्चर प्रवृत्ति कहिले होला त्यागिने ? ‘अस्तु’